Iisemina ze-3D zoLuntu icebo elilungileyo le-AutoDesk eSpain-Geofumadas
Ikhaya/AutoCAD-AutoDesk/Iisemina Zomphakathi 3D isicwangciso esihle se-AutoDesk eSpeyin
Kungekudala wazisa ngeTxus Kwibhlog yakhe, ubuncinci ezo iSer & Tec ziya kufundisa ngoMeyi 14 eMalaga nangoMeyi 8 eValencia. Abona basasazi baphambili be-AutoDesk eSpain bazakube behambisa iisemina ezijolise kulawulo lomhlaba kunye nommandla phantsi kweNdalo ye-3D; Nazi iisemina:
Ukuphuhliswa kweMhlaba kunye ne-AutoCAD ye-Civil 3D / uLawulo lweMhlaba
I-Barcelona 6 de Mayo (i-Semiconductors ne-Systems, SA)
Erandio 21 de Mayo (Semiconductor kunye neeNkqubo, SA)
IMálaga 14 de Mayo (Servitec Servicios Informáticos, SL)
Paterna, 15 de Mayo (APLICAD, Izicelo zeCAD, i-CAM kunye ne-GIS, SL)
Seville, ngoMeyi 15 (CAD & LAN, SA)
IMadrid, ngoMeyi 16 (CAD & LAN, SA)
Vigo, 29 kaMeyi (Asidek, SL)
I-Sant Just Devern, ngo-Epreli 17 (CAD & LAN, SA)
IMadrid, i-13 de Mayo (iCad Max Systems, SL)
Ukuhlanganiswa kweprojekthi ye-Civil 3D kwiNkqubo yoLwazi lweGaographic
Nangona le ndlela ithatha ukubaluleka kwayo ngokuxhomekeke kwinkampani, ngokusisiseko i-AutoDesk ifuna ukukhuthaza ukubakho kwe-AutoCAD Civil 3D, kwaye kwimeko yeServitec, ikwabandakanya ukuphatha ukusebenza kweMap3D, ngoku edityaniswe kwiphakheji efanayo. Ezi zinto zilandelayo:
Ukuguqulwa kweedatha ezithathiweyo kwintsimi kwi-AutoCAD idatha:
Ukungenisa ngokuzenzekelayo kwedatha yegrafu.
Isizukulwana esizenzekelayo seengqungquthela kunye neengcingo ze-triangulation kwi-2D kunye ne-3D.
Uhlalutyo olubanzi kunye nohlalutyo lwezolimo.
Ukuhlaziya ngokuzenzekelayo kwe-MDT.
Uhlalutyo lweendlela ezahlukeneyo zendawo,
Ukudala ngokuzenzekelayo kwexesha elide, iiprofayili ezitshintshileyo kunye nezicatshulwa.
Ukulungiswa nokuhlaziywa ngokuzenzekelayo kweeprofayili kunye nama-guitar.
Ukufunda ezinye iindlela kunye nokukhetha okufanelekileyo.
Ukubalwa kwemisebenzi yomhlaba kunye nobumba:
Ukubala ngokuzenzekelayo kokunquma nokuzalisa imiqulu.
Ukuhlaziywa ngokuzenzekelayo kweenkcazo kunye nemiqulu.
Ukufundwa kweziganeko ezahlukeneyo zeendawo ezifanelekileyo kwendlela yeendlela, ukucoca, imigangatho yasezidolophini, .etc.
Eyona nto iphezulu, ikhululekile. :), apha ungabona iinkcukacha ezipheleleyo zezifundo kunye neefom zokufaka isicelo.
AutoDesk Blog 3D civil
Ndiyombulela umntu oye waya kwii-semina ukuze ndidlulise iingxelo ngokubulela
g! okanye umntu, ndiyasebenza kumzobo wesitrato, phantse njalo nisenza ngesitishi esipheleleyo kodwa ngoku ndilethe idatha yezithuthi kunye nenqanaba (amanqamlezo ahambayo) ngaba ubani owaziyo ukuguqula le datha kwi-UTM? Ndine-axis echaziweyo kwaye ukufundwa kwamacandelo ubude buyeke ukuphakama kwi + okanye-, umgca wendawo, ubude obude kumgangatho + okanye ... -kuba umntu undinceda jcpescotosb@hotmail.com
enkosi ngokulungiswa, kwaye ngethemba yonke into ihamba kakuhle ...
UTxus ubhengeze kutsha nje kwibhlog yakhe, ubuncinci ezo iSer & Tec izakufundisa ngoMeyi 8 eMalaga nangoMeyi 14 eValencia ……… .Imihla ayilunganga kulo mhlathi. NguMeyi 8 eValencia nangoMeyi 14 eMalaga… 😉
Eneneni ukubaluleka okukhulu semina ukubonisa izakhono of Civil 3D ngokuphathelele ukusetyenziswa imifuziselo digital kunye terrain ngokubanzi, kodwa kongezwe ubalulekileyo nomtsalane oku, ukukwazi uhlanganise yonke zakhiwe 3D civil for data GIS nge MAP.
Umkhwa woLawulo kufuneka ube kukucela ukuba zonke iiprojekthi zeziseko zophuhliso zamkelwe zikhatshwa yidatha yeprojekthi kwi-GIS "format", ngoko ke ukubaluleka kokuba isicelo esifanayo singakwazi ukusingatha le datha kunye nokungabikho kokulahleka kwedatha kunye nokuphuculwa kokugqibela. imveliso.
Ngendlela ... Ndiza kunika isemina yaseMalaga kunye nomlingane